Zimkhalele ovulele ngenhlamvu ngemuva kokuncishwa iziphuzo | News24
Zimkhalele ovulele ngenhlamvu ngemuva kokuncishwa iziphuzo
Durban - Owesilisa ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngemuva kokuvulela ngenhlamvu ngasesikhumulweni samabhasi kuWarwick Avenue, eThekwini, ngemuva kokuncishwa iziphuzo.
"Ngabo-07:00 ekuseni umsolwa ufice amadoda amabili edlala i-snooker ezishayela neziphuzo. Ube esenxenxa ukuba amphuzise ngenkani, kwathi uma enqaba wawakhiphela isibhamu," kusho isitatimende samaphoyisa.
Kuthiwa la madoda amabili axoshe umsolwa, okuyilapho edubule khona ebhekise ngakuwo ngenhlanhla kwangalimala muntu.
"Umphakathi ube usuqoqana, wamtitinya ngenduku umsolwa kwaze kwalamula ukufika kwamaphoyisa abe eseyambopha," kuqhuba isitatimende.
OLUNYE UDABA: Udubule umkakhe emlenzeni kubangwa imali eduke endlini
Umbiko uqhuba ngokuthi umsolwa utholakale nesibhamu sohlobo lwe-9mm asisebenzise kulesi sigameko. "Uphenyo lokuqala luveze ukuthi umsolwa ubevele efunelwa icala lokubulala uKhulekani Sigwebela, 34, owadutshulwa washona ngoMgqibelo kuJulius Nyerere Avenue.
Esigamekweni sokuqala, kusolakala ukuthi isisulu sasiphuza nabangani baso nomsolwa ngesikhathi kuqubuka ingxabano. "Umsolwa wabe esehosha isibhamu wadubula umufi."
Umsolwa, 25, kulindeleke ukuba avele enkantolo kungekudala ngamacala okubulala, ukuzama ukubulala, ukutholakala nesibhamu nezinhlamvu okungekho emthethweni.